Aqalka Sare oo ka hadlay Doorashadda Guddoonka cusub ee Jubbaland - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Aqalka Sare oo ka hadlay Doorashadda Guddoonka cusub ee Jubbaland
Aqalka Sare oo ka hadlay Doorashadda Guddoonka cusub ee Jubbaland
Aqalka Sare ayaa hambalyo u diray Xildhibaanada cusub ee Jubbaland iyo sidoo kale doorashada Gudoonka Baarlamaanka Jubbaland.
Gudoomiye ku xigeenka koowaad Aqalka Sare Abshir Maxamed Axmed Bukhaari ayaa sheegay in uu hambalyo u diraayo Guddoonka cusub ee baarlamaanka Jubbaland.
“Waxaan hambalyo & bogaadin u dirayaa Mudane Sh. Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan oo ku guuleystay doorashadii guddoomiyenimada baarlamaanka 2aad ee Dowlad Goboleedka #Jubbaland & labadiisa ku xigeen Mudane Aadan Khaliif Xaaji (KX 1aad) & M’dne Cabdi Baaleey Xuseen (KX 2aad)” ayuu yiri Gudoomiye ku xigeenka Koowaad Aqalka Sare.
Hambalyadda Gudoomiye ku xigeenka ayaa kusoo beegmeysa xilli Wasaaradda arrimaha gudaha Xukuumada Soomaaliya ay sharci daro ku tilmaantay habkii loo soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Maamullka Jubbaland.
War Saxaafadeed kasoo baxay Wasaarada ayaa lagu sheegay in aysan aqoonsan doonin Natiijo kaste oo kasoo baxda Doorashooyinka maamulka Jubbaland hadii aysan waafajin Sharciga.
Previous articleDHAGEYSO: Warka Habeen ee Radio Risaala 17-08-2019
Next articleRasaas laga maqlaayo Xarunta loogu tala galay Shirka dib u heshiisiinta Galmudug